ထိထိမိမိနဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ကွက်ကာတွန်းလေးများ (3) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ထိထိမိမိနဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ကွက်ကာတွန်းလေးများ (3)
ထိထိမိမိနဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ တစ်ကွက်ကာတွန်းလေးများ (3)
Posted by နွယ်ပင် on Dec 22, 2010 in Entertainment |9comments
အားပေးသွားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးပါ နီလေးရေ … ဒါပေမဲ့ “မှန်တာပြောရင်ရွာပြင်ထုတ်ခံနေရမယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ဦးဗျို့”
ဆိုတာကိုတော့ နားမလည်ပါဘူး . နွယ်ပင်က ထိထိမိမိနဲ့ ရီစရာကောင်းတဲ့ ဟာသလေးတွေကိုပဲ တင်ပေးတာပါ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်နော် … နားကိုမလည်တော့ဘူး …
ဘယ်သူက ရွှာပြင်ထုတ်မှာလည်း ဘာကိစ္စထုတ်စရာအကြောင်းရှိလို့လည်း။
အမှန်ပြောရမှာ ကြောက်နေရင် တစ်သက်လုံး တိုင်းပြည် ခွေးကျွန်အောက်ကကို လွတ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဟုတ် တယ် ဗျာ .. ဒါ ပေ မဲ. အ များ က တော. ကြောက် နေ ကြ တုန်း ပဲ ဗျာ ..
ဟုတ်ပဗျာ။ အမှန်ပြောဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အမှန်တွေပြောလို့ ဒုက္ခရောက်ပေါင်း များလှပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မှန်တာကိုပဲအမြဲတမ်းပြောမယ်။ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဟာ အခြေခံအကျဆုံးလူ့ဂုဏ်သိက္ခာအနေနဲ့ (ကောင်းတာလုပ်ဖို့က နောက်မှ) မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မှန်တာကိုပြောရဲတဲ့လူ တိုင်းပြည်မှာ များသထက်များလာဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ကောင်းပါတယ်… ဒီရွာထဲမှာပဲပြောနော် တစ်ခြားသွားမပြောနဲ့ တိရား
နွယ်ပင်ရေ …ကာတွန်းလေးတွေကတော့ကောင်းပါတယ် ..။ ကိုယ်က စေတနာထားပြီး တခြား ရွာသူ၊ရွာသားတွေကို ပြပေမဲ့ တစ်ချို့က ပထွေးအဖေတော်ချင်တဲ့ဟာတွေ ရှိလို့ အင်တာနက်ဆိုင်ကနေ မတင်ပါနဲ့ … နိုင်ငံရေး အကြောင်းကို ၀က်ဆိုက်တွေမှာ တင်ခဲ့လို့ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်အဖြစ်ကိုပဲ နမူနာကြည့်ပါဦးနော် ။ သူ့ခမျာ အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ကျရတဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ပါတဲ့ …. ။
အခုလို သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် etone ရေ . နွယ်ပင်ကလဲ တခြား ရွာသူ၊ရွာသားတွေကို ပြစေချင်တဲ့ စေတနာတင်ပေးတာပါ . အတက်နိုင်ဆုံးတော့ ဒီဆိုဒ်ကို ပို့စ်တင်တိုင်း အင်တာနက်ဆိုင်က မတင်ပါဘူး ပထွေးအဖေတော်ချင်တဲ့ဟာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ပါ . ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို သတိပေးတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ….ကိုနေဘုန်းလတ် အကြောင်းကိုလဲကြားပါတယ် . အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် အနှစ် (20) ကျခံရတဲ့ သူ့အတွက်တော့ ဘဝကိုရိုက်ချိုးလိုက်သလိုပါပဲ .